Vaovao - Fiainana mahafinaritra eo ivelan'ny habakabaka miaraka amin'ny fanaka ety ivelany
Ny zaridaina sy ny lavarangana dia afaka mamorona fiainana lavorary ho an'ny habaka ivelany.
manana drafitra foana isika hoe: hamboly karazan-voa isan-karazany aho raha manana zaridaina, mitazona ny Lohataona miaraka amin'ny tara-pahazavana sy voninkazo. Na, raha manana efamira vitsivitsy amin'ny tokontany aho, dia te ho mpihaingo amin'ny varavarana andohalambo, mipetraka eo alohan'ny varavarankely misy varavarankely sokitra. Raha manana lavarangana ivelany aho dia mitsambikina avy hatrany ao an-tsaiko ny mankafy ny habaka ivelany miaraka amin'ireo fianakaviana sy namana.
Raha manana lavarangana miaraka amin'ny trano sy ao an-trano isika, ny fomba tsara indrindra dia ny fampiasana azy amin'ny fanaka ivelany sy ny toetoetran'ny natiora. Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina fatratra dia mety hahatsiaro mavesatra amin'ny asa ny olona. Aorian'ny ora fiasana adiny 8, ny tranonay mamy no toerana mety indrindra hampiala-sasatra. Dobo filomanosana, vitsivitsy tresses lehibe miaraka amin'ny maitso manitatra samy mahatsapa antsika amin'ny hery sy ny fahavelomana.
Ny famolavolana fanaka ivelany tsara dia misy ireto manaraka ireto: fitaovana, fananganana, teknolojia ary ny fomba fanao. Sun Master dia mihoatra ny fanamboarana ivelany mandritra ny 20 taona, nefa koa orinasa mpanentana ny endrika manana modely vaovao 30 isaky ny vanim-potoana.
Ity zaridaina amoron-dranomasina ity dia mamela anao hankafy ny fividiananao foana rehefa tonga eo imasonao, na aiza na aiza misy azy. Alao an-tsaina fotsiny, mandry eo amin'ny farafara rattan ianao, eo manodidina ny hazo sy ny voninkazo, ny tara-pahazavana tsara sy ny rivotra madio dia feno ny manodidina. Sun Master dia miahy ny kalitaon'ny sombintsombinay. Ny seza ivelany sy ny efitranony any ivelany dia mihoatra ny mahafinaritra, mateza miaraka amina endrika mahaliana amin'ny antsipiriany, fa manasongadina ihany koa ny zavatra niainana iray manontolo tamin'ny fampiasantsika ny fanaka ety an-kalamanjana.
Ireto misy antsipiriany momba ny lozisialy any ivelany:
Ny lamosina azo ovaina dia manome toerana dimy hampiasaina.
Ny lozisialy malefaka malefaka dia mety amin'ny lohanao. Azo esorina izy io, azo sasana miaraka amin'ny fonony 2.
Ny sisiny sy ny faritra mihodina dia mahatohitra ny masoandro amin'ny tenona rattan polyester tsara kalitao.
Ny base aluminium dia miorina tsara.
Fivoriana haingana ataon'ny DIY miaraka amina fanamboarana maivana.